Ndokumbirawo kushandisa yedu yekuonana fomu
Tichadzokera kwauri nekukurumidza sezvazvinogona!
Pamibvunzo yakatwasuka uye nerumwe ruzivo unogona kutisvitsa pano: </a>
Nzere: + 49 2131 4058 629
Tinodzivirira kodzero dzevanhu mumusoro medu. Tishanyire muBerlin. Guardsmen 71 - 101
E-mail address (inoda)
PixelHELPER Foundation | mapurasitiki eWannsee Berlin, Germany
Tiri kurwira nyika iri nani
Ndinokutendai nekufarira kwenyu kuPixelHELPER. Marobhoti evanhu anotenda nekushanya kwako. Yedu 4 Meter mabhoti yakasikwa nevanamateki vedu nokuda kwevakuru vakuru. Kana ukasarudza kutitsigira iwe unogona kugamuchira robot sechipo. Mifananidzo yakawanda imabasa chaiwo enyanzvi. Semapurasitiki makuru akagadzirwa papier-mâché, unogona kukwanisa kupinda chero ipi neipi yehofisi, yekutengeserana kwebhizimisi kana yekaterergarten yekambani. Saka kana iwe une chimwe chinhu chinokosha kuti utitaurire, kana kuti unoda kupa kune sangano redu, tinotarisira kukuratidzai mikana yebasa redu. Mutambi weChiedza Oliver Bienkowski neboka rake vakavaka 4 Meter yakareba zvifananidzo zvakawanda kuti vana vaseke uye vashamiswe. Our Youtube star Jörg Sprave akavaka maruva beach ball catapult. Zvose zvinobva pazvifananidzo zvinoenda kune sangano rerudo. Ndinokutendai nekutsigira.
udza mashoko January 9th, 2020Oliver Bienkowski